Facebook သုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးများဖတ်ရန် တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးပါ – Let Pan Daily
fb သုံးနေတဲ့မိန်းကလေးများ ဖတ်ရန်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအနည်းငယ် သာပြောင်း၍ရေးပါသည်
တစ်နေ့ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် လူလတ်ပိုင်းဓာတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အကောင့်တစ်ခု မက်ဆင်ဂျာကနေ ညီမလေး အစ်ကိုစကားနည်းနည်းပြောချင်လို့ ရလား “ဆိုပြီးစာဝင်လာတယ်။ အကူအညီတစ်ခုတောင်းချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ လို့ရေးမိလိုက်တာနဲ့ဗွီဒီယိုကော ခေါ်တာခံလိုက်ရတယ်။
ရုပ်ဖြောင့်သလောက် အပြောကောင်းလွန်း လှတဲ့သူ့ စကားတွေကြားမှာဖုန်းကို ပိတ်မပစ်ရက်အောင်ဖြစ် ခဲ့ရပါတယ်။”အပျိုလား” ဆိုတဲ့သူ့စကားကကျမကို နည်းနည်း တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ခနလောက်ငိုင်နေပြီးမှကျမယောင်္ကျားနဲ့ ကျမ အတူတူတွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံ ပို့ပေးလိုက်တယ် ။
“ညီမတို့ ချစ်သူတွေလား “ဆို တဲ့ မေးခွန်းလေးက ကျမ ကိုကြည်နူးသွားစေပါတယ်ဘေးနားမှာ အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ သားလေးကိုမလုံမလဲ ကြည့်လိုက်မိတယ် ကျမယောကျား လူရိုးကြီးကတော့ယာတောကပြန်မလာသေးပါဘူး
ကျမ ထင်လိုက်တာက တစ်ခါတည်း နားအေးအောင် ဆိုပြီးအမှန်ကို ချပြလိုက်တာမှ ပိုဆိုးသွားပါတယ် တိုတိုနဲ့ လိုရင်း ကိုပြောရရင်ကျမ တို့ နေ့တိုင်းဖုန်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဖုန်းမလာရင်ကျမကစခေါ်တတ်နေပါပြီကျမယောက်ျား လူရိုးကြီးကတောဘာမှမသိရှာပါဘူး။
သူ့ကတော့ ကျမကို သိပ်ပြီးဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူးယာတော နဲ့အိမ် ကူးနေတာနဲ့သူ့ကျွဲတွေနဲ့တင် အချိန်ကုန်နေရှာ တာပါ။ ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းသူက ကျမကို သိပ်ချစ်ကြောင်းတွေပြော လာပါတော့တယ်။
ကျမ အဖြေကိုတော့မပြောတော့ပါဘူး သူကတစ်ဆင့်တက်လာပါတယ် ကန်တော့ပါရှင်လင်မယားတွေကြားမှပြောရမဲ့ စကားတွေကိုတစ်တစ်ခွခွပြောလာပါတယ်။ အစကနားမထောင်ရဲပေမဲ့နောက်တော့ စွဲလမ်းလာပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့အပြင် မှာတွေ့ချင်တယ်တဲ့။
ကျမယောက်ျား နဲ့ သားလေးမျက်နှာကိုဖြတ်ကနဲ မြင်ယောင်မိတယ်။ ကျမယောက်ျားက ကျမကိုသိပ်ချစ်ရှာပါတယ်။ သူရှာဖွေ ထားသမျှ ကျမကိုအကုန်အပ်တယ်။ ကျမပျင်းနေမှာစိုးလို့ ဆိုပြီးဖုန်းကိုတောင်သူမကိုင်ဘဲ ကျမကိုပဲပေးကိုင်ရှာတာပါ။
ငွေဆိုလည်း မစားရက် မသောက်ရက်နဲ့ သိန်းနှစ်ဆယ်လောက်စုမိနေ ပါပြီ။ ဒါနဲ့ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်ရှင် ဆိုပြီးငြင်းဆန် လိုက်မိပါတယ်။ သူကစိတ်မဆိုးတဲ့ အပြင်မိန်းကလေးပီသလို့ ပိုတောင် တန်ဖိုးထားမိပါတယ် ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်။
တစ်နေ့မှတော့ ကျမယောက်ျားဝါးတော သွားတဲ့နေ့သူ့ ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ သူ ကျမတို့ရွာထိပ်မှာရောက်နေတယ် တဲ့တွေ့ချင်လွန်းလို့ အဝေးကြီးက လာခဲ့ရတာပါတဲ့ ခနလေးတွေ့ပါရစေတဲ့ မဆွတ်ခင်ကညွတ်မခြွေခင်က ကြွေချင်နေတဲ့ ကျမသားလေး အိပ်မောကျချိန်မှာသွားတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုမှပြင်မရတော့တဲ့ အမှားပါပဲ မကျမ်းကျေလွန်းလှတဲ့ သူ့လက်တွင်း မှာသူပြသမျှ နုခဲ့မိပါတော့တယ်။ လင်မေ့ သားမေ့နဲ့ မိုးလင်းခါနီးမှ အိမ်ပြန်ဖို့ သတိရပါတော့တယ်။ သူမ ကိုသူက “ကလေး” ကျမကသူကို “မောင်” ဆိုပြီးအခေါ်အဝေါ်တွေ ပြောင်းကုန်တဲ့ အထိပါပဲ။
ကျမ နောင်တမရပါဘူး အိမ်ကဟာကြီးလည်း အားမနာတော့ပါဘူး ကျမဘဝမှာ မောင်မှမောင်ပါပဲ နောက်တစ်နေ့မောင်က မက်ဆင်ဂျာကနေကျမကမောင့်ပါးလေး ကို နမ်းနေတဲ့ ပုံ လေးတစ်ပုံ ပို့တယ်။နောက်တစ်ပုံ မောင်က ကျမ နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းနေတဲ့ ပုံ ထပ်ပို့ အပြီးမှာ ကျမအံ့သြသွားတယ်မောင်ဘယ် အချိန်ရိုက်ထားပါလိမ့်နောက် တစ်ခုက ဗွီဒီယိုမောင်နဲ့ကျမနဲ့ဘုရား,…. ဘုရားရှက် လိုက်တာရှင် …
နောက်တစ်ခါထပ်တွေ့အပြီး မှာတော့ကျမလေကျမမောင့် လက်ခုပ်တွင်းကရေဖြစ်သွားပါပြီ ဆားငံရည်သောက်မိတဲ့ကျမလူရိုးကြီး နဲ့သားလေးကိုရှိတယ်တောင် မထင်တော့ပါဘူး ကျမဘဝကမောင်မှမောင်ပါပဲ ..
ကျမမျှော်လင့်ခဲ့ရတဲ့ တစ်နေ့ဆိုက်ဆိုက်ရောက် လာခဲ့ရပါပြီမောင်က ဘဝသစ်ထူထောင်ကြမယ်တဲ့ ဒီနေ့ည လာခိုးမယ်တဲ့ အရင်းအနှီးနဲ့လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ရှိသမျှငွေ ယူခဲ့ပါတဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့ အကြံလက်စွပ်၊ လက်ကောက်၊ ဆွဲကြိုးရှိရှိသမျှ မချန်သားလေးလည်ပင်းက ခမည်းပေးထားတဲ့ဆွဲကြိုးလေးတောင် အသာလေးဆွဲဖြုတ်မောင် နဲ့ ဘဝသစ်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ ဘယ်သူ့မှမညှာနိုင်ပေါင်အပျော်ဆုံးညမောင်က ကိုယ်ပိုင်ကားလေးနဲ့ကျမနေတဲ့ရွာ အထိ လာခိုးမှာတဲ့မျှော်တုန်းမျှော်စဲမှာပဲ ကိုယ်ပိုင်ကားလေးနဲ့မောင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ခြင်းများစွာနဲ့မောင်ခေါ်ရာ လိုက်ခဲ့မိပါပြီ။ ကားလေးပေါ်မှာပဲကျမဆန္ဒတွေပြည့်ဝခဲ့ရပါပြီ မနက်လင်းတော့မြို့တစ်မြို့တည်းမောင်းဝင်ခဲ့ကြတယ်။ မောင်ကမောင်တို့နှစ်ယောက် ဒီကားလေးနဲ့ဆက်သွားရင်နောက်က လိုက်လာတဲ့ သူတွေရိပ်မိသွားနိုင်တယ်အဲဒီတော့မောင်တို့ ကားပြောင်းစီးကြမယ်တဲ့ ရန်ကုန်ကလူလိမ်လူရှုပ်တွေများတယ်တဲ့ ကလေးစီကရွှေငွေပစ္စည်းတွေ ဖုန်းနဲ့ငွေတွေမောင့်စီပေးထားတဲ့မောင့်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါင်းထားမယ်တဲ့အရာရာမောင့်သဘောပါမောင်
တစ်နေရာရောက်တော့ လူတစ်ယောက်ကကျမ နဲ့မောင်စီးလာတဲ့ကားလေးကိုလာယူသွားတယ်။ ကားဂိတ်ကိုခြေလျင်လျောက်ကြတယ်ကားဂိတ်ရောက်တော့ကားတစ်စီးပေါ်မှာနေရာယူလိုက်ကြတယ်မောင်ကလူတွေရိပ်မိမှာစိုးလိုတဲ့သူ့ကိုယ်သူ ဦးထုပ်ကို မျက်နှာမပေါ်အောင် ခပ်ငိုက်ငိုက်ဆောင်း ထားပြီးကျမခေါင်းကို ပုဝါခြုံခိုင်းထား တယ်မောင်ကကျမကိုခပ်တိုးတိုးလေးပြောတယ်ကလေးတဲ့မောင် တို့တစ်ညလုံးဘာမှမစားရသေးဘူးတဲ့မောင်အစားအစာတွေ သွားဝယ်အုန်းမယ်တဲ့
လိုက့်ခဲ့မယ် ဆိုတော့လူတွေရိပ်မိမယ်တဲ့ ကားနေရာပျောက်မယ်တဲ့… ဆိုပြီး တစ်ယောက်တည်းထွက်သွားတယ်။ တော်တော်နဲ့ပြန်မလာဘူး စိုးရိမ်လို့ဖုန်းဆက်မယ် လုပ်တော့ဖုန်းကမောင့်စီပါသွားပြီ ကားကထွက်တော့မယ်မောင်ကပေါ်မလာ။
ကားဆရာကြီး ကိုတောင်းပန်ပြီးဆက်စောင့်ကြတယ်။ ၁၅မိနစ်ထိမောင်ကပေါ် မလာတော့ခရီးသည်တွေက တင်းပြီကားဆရာကြီးလည်းမတတ်သာတော့ ကျမကိုချထားခဲ့ပြီးကားထွက်သွားခဲ့ပြီကျမ စိုးထိတ်စွာရပ်တည်မရစွာနဲ့မောင့်ကိုဆက်စောင့်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ မရှက်နိုင်တော့ပါဘူး ဟိုလူ့အကူညီတောင်းသည်လူ့အကူညီတောင်းနဲ့ ရဲစခန်းရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အထောက်အထား ဘာမှမရှိမှတ်မိတဲ့မောင့်ဖုန်းနံပါတ် ကျမဖုန်းနံပါတ်တွေဆက်ကြည့်ကြတော့တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါတဲ့
မြိုအနှံ့ရှာကြ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးကြပေမဲ့ခြေရာလည်းပျောက်ရေလည်းနောက်ခဲ့ပါပြီနောက်ဆုံးတော့ သဘောကောင်းလွန်းတဲ့ရဲကြီးတွေကငွေကြေးက အစကူညီပေးကြလို့သာကျမရွာပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမ ထင်ခဲ့တာ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး ။ ကျမ မျှော်မှန်းခဲ့တာ တာ ဒီလိုတွေ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။
ကျမ မှားသွားပြီ မောင်အထင်ကြီး ခဲ့သမျှအားလုံး အလကားပဲ ဆိုတဲ့အတွေးတွေနှမချင်းမစာနာလုပ်ရက်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ဒေါသတွေထက်ကျမ ဘယ်လို အင်အားနဲ့ရွာကိုဝင်ရမလဲလူရိုးကြီးနဲ့သားလေးထံဘယ်မျက်နှာနဲ့ပြန်ရမလဲ
ကျမ ဝမ်းနည်း စိတ်ကြောင့် ငိုမိတယ် . . .ကျမ မိဘတွေ ရဲ့ မျက်နှာကျမ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ မျက်နှာကျမ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျမ ဘယ်လိုမျက်နှာပြရမလဲ။ကျမသာ အရင်ကတည်းကလင်နဲ့သားအပေါ်ကိုယ့်ချင်းစာစိတ်ရှိရင်ကျမတို့ မိသားစုဘဝလေးအခုလို ပျက်စီးမှာ မဟုတ်ဘူး . . . . . .ခုတော့ ကျမ ခလေးတစ်ဖက် နဲ့ ကျမ ဘဝ ပျက်ပါပြီ .ကိုယ့်ကြောင့်မိသားစုဘဝ ပျက်ခဲ့တာကိုယ့် ယုံစားခဲ့တာ ။
FB က ပရိုဖိုင်လေး မှာကော်လံကတုံးအဖြူလေး နဲ့ ဆံပင်အတိုယောပုဆိုးလေး နဲ့ မောင်ကိုကျမ လူကြီး လူကောင်း ဆန်တယ် ဆိုပြီး ယုံစားမိခဲ့တာအဖေ အမေ မျက်နှာရယ်လင်နဲ့သားမျက်နှာရယ် တစ်သက်လုံးစောင့်ထိန်းခဲ့တဲ့ကိုယ့်ကျင့်တရားရယ် . . . . . .ကိုယ့်ပေးဆပ်ရတော့မယ့် အရှက်သိက္ခာ အကြီးကြီးရယ် ။
နောက်ထပ် သတိရတာကနိုင် လွန်ကြိုးခွေ တစ်ခုအခု ကျမ ဘာလုပ်သင့်လည်း . .အစ်မတို့ ညီမတို့ကောအဲလို ကြုံကြိုက်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအရေးကြီးတယ် ။လိမ်နည်းအသစ်တွေနဲ့ချည်းကပ်တက်တယ် ။အမျိုးကောင်းသား ပုံစံနဲ့ချဉ်းကပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရိုးသားယောင်ဆောင် ချိုချိုသာသာမိန်းမကြိုက် စကားတွေပြောပြီးဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သမီးရည်းစား အဆင့်ထိ ဆွဲယူပြီးအပြင်မှာ ချိန်းတွေဓါတ်ပုံတွေ တွဲရိုက် ပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ပြီ ဆိုရင်ရုန်းထွက်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ် သတိထားကြပါ။လေလှိုင်းထဲက အချစ်တွေ စိတ်သာယာမှုတွေ နောက်မလိုက်ကြပါနဲ့။မမြင်ဖူးတဲ့ လူတွေကို မယုံကြပါနဲ့။ မသင့်သောအရေးအသားများပါဝင်ပါကတောင်းပန် အပ်ပါသည်။
မြန်မာပြည် တဝှမ်း မိုးကြီးနိုင် မည့် ဒေသ များနှင့် ယနေ့ မိုးလေဝသ အခြေ အနေ
၀က်သားကို ဘယ်လောက် ကြိုက်ကြိုက် လုံးဝ မစားသင့်တဲ့ အစိတ် အပိုင်း (၅) ခု